I-China enokuphinda isetyenziswe kwakhona iRekhodi eQinisekisiweyo yePhepha yeBhokisi yeentyatyambo yoMvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenziwe
Zininzi iindlela zeentyatyambo, siya kuzinika abantu abohlukeneyo ngokweentlobo ezahlukeneyo, baveze intsingiselo eyahlukileyo. Nokuba ukuqonda kweentyatyambo akukho nzulu kakhulu, abantu bale mihla ngokusisiseko bayazi ukuthumela iiroses kubathandi, ikhathuni kubadala, kunye neenyibiba kubahlobo. Kukho isipha, ibhaskiti yesandla, ishelufu yebhasikiti, ukupakishwa kwebhokisi yeentyatyambo, nganye inendima eyahlukileyo kunye nefuthe.
Umzekelo, kwimeko yam, ndingathanda ukufumana isipha seentyatyambo ngoSuku lweValentine, olukhulu kakhulu, ngakumbi olutsala amehlo kwaye lukhulise ukuzithemba kwam. Abo banika izipho iinkokheli kunye nabadala ikakhulu baya kuthwala iibhasikiti zeentyatyambo kunye neebhokisi zeentyatyambo ukubonisa intlonipho kunye nokuhambelana nenqanaba labo. Ngamanye amaxesha, ubuntu bomamkeli weentyatyambo buneentloni ngakumbi, isitshixo esiphantsi okanye imeko-bume ayilungelanga ukubhengezwa kakhulu ukuba ingathumela ibhokisi yeentyatyambo.
Okwangoku, iibhokisi zeentyatyambo zithandwa kakhulu ngenxa yezizathu ezithathu.
1: khusela iintyatyambo azifumani monakalo, ukuze iintyatyambo zikwimeko entle xa zithunyelwe.
2: isitshixo esiphantsi, esivela ngaphandle asikwazi ukubona ngqo ukuba, gcina inkathazo engafunekiyo kunye nengxoxo.
I-3: Isiphelo esiphakamileyo, iintyatyambo ezithunyelwe ngebhokisi yesipho ngokuqinisekileyo ziphezulu kakhulu kunesipha kunye nengobozi, eyenza isipha sonke sibe semgangathweni ophezulu.
Rhoqo kusuku olubalulekileyo, iindwendwe ezahlukeneyo zevenkile yeentyatyambo kumjelo ongapheliyo, khetha iintyatyambo ukunika abantu babo ababalulekileyo.
Zintathu iintlobo zezipho: ibhokisi yesipho, isikwere ibhokisi yesipho, ibhokisi yesipho ephindwe kabini kunye nentliziyo. Iintyatyambo zebhokisi yesipho esiziikwere, ibhokisi eneebhokile zesipho esinexande ezifanelekileyo kwiinkokheli, abadala, njl.njl. Ibhokisi yezipho ezibini ngaphambi kwentyatyambo kumnatha womlilo okhethekileyo, amacala amabini aphezulu kunye asezantsi aneedrowa, umaleko olungileyo ziintyatyambo ezintsha. Uluhlu olufanelekileyo kukubeka isipho, umlomo womlomo, isacholo somqala njalo njalo. Abantu abaninzi baqala ukuxelisa iibhokisi zeentyatyambo eziphindwe kabini, ngqo kwi-Intanethi, kuphela kwintombazana efumene uluhlu lweeblue ezingaqhelekanga zeentyatyambo ezingezizo, ukumangaliswa kuguquke kwayothusa.
Usuku lukaValentine luthandwa kakhulu ziibhokisi zesipho esenziwe ngentliziyo, imbonakalo yothando iyathandana ngakumbi kwaye ikhethekile, kukho isaphetha esihle, vumela abantu bangaziboni becinga ubuhle bangaphakathi. Iintyatyambo ezimile ngentliziyo azibizi. Zilingana neentyatyambo ezimile okwesikwere, kodwa zintle kakhulu.
Egqithileyo Ikhadibhodi engwevu yokugcina ibhokisi yempahla yangaphantsi
Okulandelayo: isiciko esikhutshiweyo esinebhokisi yokugcina ekhaya iikawusi ibhokisi yephepha